ဆုံဆည်းရာ: NO. စာလုံးပါ တီရှပ်များ ပြန်သိမ်းနေ
NO. စာလုံးပါ တီရှပ်များ ပြန်သိမ်းနေ
မဇ္ဈိမသတင်းဌာန-နန်းဒေ၀ီ၊ ဧပြီ ၂၁ ရက် ၂၀၀၈
နယူးဒေလီ။ ။ ရန်ကုန်မြို့ အရောင်းစင်တာ တချို့်တွင် ရောင်းချပြီးဖြစ်သော Nobody တံဆိပ် အမှတ်အသား အတိုကောက်စာလုံး NO. ပါရှိသည့် တီရှပ်များကို အရောင်း ကိုယ်စားလှယ်များက ပြန်လည် သိမ်းဆည်းနေသည်။
ထိုင်းနိုင်ငံထုတ် Nobody ကုန်အမှတ်တံဆိပ် Logo အတိုကောက် ရေးထားသည့် NO. စာလုံးပါ ရောင်စုံတီရှပ်များကို အရောင်းစင်တာများသို့ ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချပြီး ၃ လအကြာတွင် ယခုလို ပြန်လည် သိမ်းဆည်းနေခြင်း ဖြစ်သည်။
“NO. ပါနေတယ်ဆိုလို့လေ။ ဟိုတလောက ဗီအိုအေ၊ ဘီဘီစီတွေကို နားထောင်ရင်းနဲ့ အဲဒါတွေ ဝတ်ပြီးတော့ ဆန္ဒပြတာတွေ ရှိတယ် ကြားထားလို့လေ။ အဲဒါကြောင့် ကျမ လိုက်သိမ်းနေတာ။ အာဏာပိုင်ဘက်က ဘာမှ မပြောပါဘူး။ ဆိုင်ထိခိုက်မှာ စိုးလို့လေ” ဟု ရန်ကင်းစင်တာ အရောင်း ကိုယ်စားလှယ်တဦးက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ရန်ကုန်မြို့တွင်း ဖွင့်လှစ်ထားသည့် Nobody အမှတ်တံဆိပ်များ ရောင်းချပေးနေသည့် Shopping Centre များ ဖြစ်သော ၈ မိုင်လမ်းဆုံရှိ Junction 8 ၊ ရန်ကင်း ရှော့ပင်စင်တာ၊ အိုရှင်း၊ အောင်ချမ်းသာ ရှော့ပင်စင်တာ၊ ဒဂုံစင်တာများမှ NO. တံဆိပ်ပါ တီရှပ်များအား ယနေ့မှစတင်ကာ လိုက်လံ သိမ်းဆည်းနေခြင်း ဖြစ်သည်။
“ဒီအမှတ်တံဆိပ်က ဒီဇိုင်းတွေက အများကြီးရှင့်။ ဆိုတော့ ဒီဇိုင်းတခုမှာ အဲလို NO. ပါတာ ၁ဝ ထည်လောက်ပဲ ရှိမယ်။ ဆိုင်တဆိုင်မှာ ဒီဇိုင်းအများကြီးထဲကနေ ၁ဝ ထည် အများဆုံးတော့ ပါတယ်။ အခုတော့ အကုန် လိုက်သိမ်းနေတာ။ တချို့ဆိုင်ကနေ ပြန်ရတာ ၃-၄ ထည်လောက်ပဲ ပြန်ရတယ်” ဟု သူက ဆက်ပြောသည်။
တီရှပ်ရှေ့မျက်နှာစာတွင် ရင်ဘတ်အပြည့် NO. စာလုံးအား အဝိုင်းသဏ္ဍာန် ပုံဖော်ထားပြီး အကျီအဖြူပေါ်တွင် အပြာရောင် NO. စာလုံးရေးထားကြောင်း မျက်မြင်တဦးက ပြောသည်။
“စာလုံးကတော့ ထင်ထင်ရှားရှားပဲ။ ကုမ္ပဏီက သူ့အမှတ်တံဆိပ်သူ ရိုက်ထားတာ။ အဲဒါ ဘာဖြစ်လို့ သိမ်းလည်းတော့ မသိဘူး။ သိမ်းမှတော့လည်း ဘောင်းဘီပါ သိမ်းရမယ်။ ဘောင်းဘီမှာလည်း NO. တံဆိပ်ပါတယ်လေ။ ခါးပတ် ပတ်ထားရင်တော့ မမြင်ရတော့ဘူး” ဟု မျက်မြင်က ပြောသည်။
စစ်အာဏာပိုင်များက နှစ်ပေါင်း ၁၄ ခန့် အချိန်ယူ ရေးသားခဲ့သည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေ (မူကြမ်း) အား အတည်ပြုရေးအတွက် လာမည့် မေလ ၁ဝ ရက်တွင် ပြည်လုံးကျွတ် လူထုဆန္ဒ မဲပေးရာ၌ ကန့်ကွက်မဲ ပေးကြရန် ပြည်တွင်းပြည်ပ အတိုက်အခံ အင်အားစုများက စည်းရုံးနေသည်။
မကြာသေးခင်က ရခိုင်ပြည်နယ် တောင်ကုတ် မြို့နယ်အတွင်း မေလဆန္ဒ ခံယူပွဲတွင် ကန့်ကွက်မဲ ပေးရန် NO. စာလုံးပါ တီရှပ်များကို ဝတ်ဆင်ပြီး လှုံ့ဆော်နေသည့် လူငယ် ၂ဝ ကျော်အား ဒေသ အာဏာပိုင်များက ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းကာ မေးမြန်းစစ်ဆေးပြီး ပြန်လွှတ်လိုက်သော်လည်း ဝတ်ဆင်ခဲ့သည့် တီရှပ်များကို သိမ်းဆည်းခဲ့သည်။
Posted by ဆုံဆည်းရာ at 9:31 AM